Wararka - Sidee loogu xidhaa gamepad-ka gacanta taleefanka gacanta?
Tillaabooyinka lagu xidhidhiyaha ciyaarta moobaylka iyo talefanka gacanta waa sida soo socota:
1. Fur interface-ka taleefanka gacanta, shid bluetooth-ka, talefanka gacanta ayaa si toos ah u geli doona xaaladda qalabka raadinta. Haddii nidaamka talefanka gacanta uusan si toos ah u raadin aaladda, waxaad riixi kartaa badhanka "Aaladda Raadinta" ee hoose.
2. Riix oo hay badhanka "LOGO" + "X" ee kontoroolka ciyaarta, kontarooluhu waxa uu galayaa heerka sugitaanka Bluetooth, iyo iftiinka tusaha ee midigta sare ee badhanka LOGO-ga ayaa sii ifaya.
3. Waxaad ku dejin kartaa gacanta adigoo ku tusaya "BETOP BFM GAMEPAD" taleefanka. "BETOP BFM
"GAMEPAD" waa magaca gacanta, dhagsii si aad isugu xirto. Ka dib markii xiriirku guulaysto, badhanka "LOGO" ayaa iftiimaya, iftiinkuna had iyo jeer waa shidan yahay. Marka gacanta lagu xidho talefanka gacanta, marka xigta ee gacanta la shido, waxa ay si toos ah ugu xidhmi doontaa talefanka gacanta. Tallaabada 2 ee kor ku xusan waa laga boodi karaa, oo kaliya tillaabada 1 ayaa loo baahan yahay. Kaliya daar Bluetooth
4. Ka dib marka gacanta si guul leh loogu xiro, waxaad si toos ah u xakameyn kartaa telefoonka gacanta. Guji badhamada kor iyo hoos ee gacanta, fareem buluug ah ayaa ka muuqan doona shaashadda telefoonka, waxaad si toos ah u riixi kartaa batoonka "A" si aad u xaqiijiso, iyo "B" badhanka si aad u joojiso.